danna, Umbhali e-BikeHike
About the Author: danna
Kuthatha isikhathi esingakanani ukululama emjikelezweni we-testosterone? Cishe wonke amadoda abe nokugxila kwe-testosterone kubuyela esimweni esijwayelekile ezinyangeni ezintathu ngemuva kokuphela komjikelezo, futhi
Umjikelezo wakho wokuqala we-steroid kufanele ube nini? Ngokuvamile, abasebenzisi bazothatha ama-steroids amasonto ayisithupha kuya kwayi-16 ngesikhathi, kulandelwa amasonto ambalwa okuthatha imithamo ephansi.
Impendulo emfushane yokuthi ukuhamba ngebhayisikili kuzokwenza imilenze yakho ibe mikhulu noma cha - cha. Yebo, ukuhamba ngebhayisikili kuthuthukisa imisipha yakho yemilenze, kodwa njengokuzivocavoca kwe-aerobic,
Yebo, ama-Fitbits angakwazi ukulandelela ukugibela kwakho ibhayisikili esebenzisa ubuchwepheshe obubizwa ngokuthi i-SmartTrack futhi awusizo kakhulu kubagibeli bamabhayisikili ngezindlela eziningi. Isici esisodwa esihlukile semikhiqizo eminingi ye-Fitbit,
1 2 ... 26,498 Olandelayo